Onye ọ bụla ma otu esi agbanyụ Posky Utility?
Onye ọ bụla ma otu esi agbanyụ Posky Utility? 3 izu 6 ụbọchị ago #1874
Ana m agba mbọ ugbu a iji gbanyụọ ike nke posky ebe ọ bụ na ọ ga-amasị m GSX ka m rụọ ọrụ ahụ. Agbanyeghị, ọ na-ekwu na uto posy bụ ogwe 13 yana m ga-achọ pịa Ctrl + M mana ozugbo m pịa njikọta a, agaghị m nweta nsonaazụ ọ bụla. Ahụ ọ bụla maara otu esi ewepụ ụdị ihe ikuku ụgbọ elu a?
Onye ọ bụla ma otu esi agbanyụ Posky Utility? 3 izu 5 awa gara aga #1877
Gbalịa ka ihichapụ ngalaba ahụ na ngalaba gị
Oge ike page: 0.178 sekọnd